कृषकहरूले सही मोल पाउनुपर्छ-डा. शर्मा - वीर गोरखा
Home / darjeeling / Nepali News / slider / कालिम्पोंग / गोरखालैंड / दार्जिलिंग / नेपाली भाषा / कृषकहरूले सही मोल पाउनुपर्छ-डा. शर्मा
कृषकहरूले सही मोल पाउनुपर्छ-डा. शर्मा
दीपक राई Friday, November 28, 2014 darjeeling, Nepali News, slider, कालिम्पोंग, गोरखालैंड, दार्जिलिंग, नेपाली भाषा
कालेबुङ : “हाम्रो गाईको दुधको मूल्य प्रतिलिटर 25 रुपियाँ। उनीहरूको पानीको मूल्य प्रतिलिटर 40 रुपियाँ”-भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्का संयुक्त निर्देशक डा. जेपी शर्माले भने,-“उनीहरू पानी पनि बेच्छ जान्दछन्, हामी दुध पनि बेच्न जान्दैनौँ। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनद्वारा आजदेखि शुरु भएको दार्जीलिङ सुन्तला अनि बढा अलैँची उत्सव कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. शर्माले पहाडका कृषकहरूले आफ्नो उब्जनीको सही मोल पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने अनुसार पहाडका सुन्तला यसका गुणवत्ता, रङ्ग र स्वादका निम्ति प्रसिद्ध छ। अर्कोतिर अलैँची खेती यहाँका कृषकहरूको मुख्य आयश्रोत हो। तर कृषकहरूले आफ्नो परिश्रमको सही मोल नपाएको उनले बताए। उनले भने, उत्पादनको 20 प्रतिशत राशी पनि यहाँका कृषकहरूले पाएका छैनन्। जबकी हाम्रो उत्पादनको 80 प्रतिशत कसले लाँदैछ भन्नेकुरा सोच्न जरूरी छ। विभिन्न निकाय एवं सङ्घ-संस्थाको माध्मयबाट पहाडका उप्जनीहरूको सही बजार व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए।
बितेका केही वर्षयता पहाडको अलैँची अनि सुन्तला विशेष किटानुका कारण प्रभावित बनिरहेको कुरा स्विकार्दै उनले यस दिशामा पनि वैज्ञानिकहरू एवं अनुसन्धान परिषद्ले काम गरिहेको बताए। उनले अझ भने अनुसार खेतीमथि लागेको रोग रोकथामका निम्ति धेरै उपायहरू अप्नाएर खेतीको गुणस्तर अनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यहाँका सुन्तला अनि अलैँचीको उत्पादनलाई यहीँ प्रोसेसिङ गरेर सही बजार व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको उनले बताए। दार्जीलिङ पहाडका लगभग चारवटै खण्डमा सुन्तला अनि अलैँची उत्पादन हुनुगर्छ। जसमा लाभा, तोदे-ताङ्ता अलैँची खेतीको निम्ति प्रसिद्ध हो भने सिटोङ, मङ्पु, तकलिङ आदि क्षेत्र सुन्तलाको निम्ति प्रसिद्ध हो। यी कृषकहरूले भोगिरहेको समस्या, उत्पादनमा वद्धि हुनुपर्ने, उनीहरूलाई तक्निकीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने, कृषकहरूले पाउने सरकारी सहुलियतहरू सम्बन्धी जनकारी प्रदान गर्नु साथै कृषकहरूलाई खेतीसम्बन्धी प्रोत्साहित गर्न आजदेखि 1 दिससम्बरसम्मका निम्ति सङ्गठनले उत्सवको आयोजना गरेको आयोजक पक्षबाट सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले बताए।।
इण्डियन एग्रीकल्चरल रिचर्स इन्टिट्यूट रिजनल स्टेसन कालेबुङ, यूबीकेभी अनि स्पाइसिस् वोर्ड अफ् इण्डियाको विशेष सहायताम उत्सव आयोजना गरिएको हो। यसअवधि नावार्डका डिपुटी जेनलर मेनेजर अञ्जना लामा, स्पाइसिस वोर्डका सह-निर्देशक डा. सोमपाल राम, सिन्कोना बगानका निर्देशक डा. सामुएल राई, आईएआरआईका बैज्ञानिक प्रभारी दिपङ्कर नागर आदि विशेष रूपले उपस्थित थिए। कार्यक्रममा विशेषज्ञहरूले उपस्थित कृषकहरूलाई कृषि सम्बन्धि विविध जानकारीहरू प्रदान गरेका थिए। उत्सवमा सुन्तला, अलैचीँ लगायतका हात-हतियार एवं जैविक किटनासकहरू स्टलमा राखिएको छ। उत्सवअवधि कृषि प्रशिक्षण, अलैँची लिलामी जस्ता विविध कार्यक्रमहरू पनि रहेको आयोजक पक्षले जनाएको छ। आजको कार्यक्रम अवधि नै कवि मनोज वोगटीका कविता कृति “पसिनाको छाला”-को दोस्रो संस्करणको पनि विमोचन गरियो। यस कविता सङ्ग्रह विशेष गरी कृषि अनि कृषकहरूमाथि आधारित रहेकाले सङ्गठनले दोस्रोचोटी यस कृषकसमक्ष पुऱ्याएको हो।